ARIMAHA QOOYSKA : Maxaa Looga Baahan Yahay Eedooyinka Cadaadiya Caruurta & Aabiyaasha Oo Qaladkaas Lagu Eedeeyo
Waxaa Qoray Maxamuud Jamuuni / Waxaa La Daabacay Sunday, 03 Dec 2017 17:00 PM / No Comments
Inta badan qooysaska soomaalida waxay leeyihiin waxyaabo badan oo ku saabsan inay dhibaato xoogan ka jiraan waxaa jira waxyaabo badan oo qaladaad ah kuwaas oo sameeyaan qaladaadka qaar ee ka dhacaan guriga.
Waxaa jira caruur badan kuwaas oo inta badan aan heeysan daryeel wanaagsan marka ay waayaan hooyada dhashay, (Dhimasho, Furiin , IWM), waxaa ay markaas danta ku qasbeeysaa inay la noolaadaan eedadooda ama islaanta guursado aabaha caruurtaas.
Waalidiinta gaar ahaan aabaha reerka waxaa ku waajib ah in mar walba uu ka war haayo xaalada caruurtiisa , sidoo kale waxaa muhiim ah in xaaladooda , waxbaraashadooda iyo sidoo kale raashiinkooda ka fikiraa.
1-Waxaa La Rabaa In Eedada Ay Noqoto Mid Naxriis Badan: Sida aan la socono marka qoyska ama reerka laga hadlayo waxaa uu ka kooban yahay hooyo iyo aabe , kadibna waxaa sii caruurta , balse waxaa jira qooys uu ka kooban yahay Aabe iyo Eedada carurta , sidaas darteeda waxaa ay la kulmayaan dhibaato badan oo dhanka reerka ah.
Haddaba waxaa waajiba ah oo laga rabaa eedada inay mar walba ku xisaabtanto xaalada caruurta oo ay ula macaamisho sida inay yihiin caruur ay iyada dhashay.
Mana wanaagsan in caruurtaas masaakimiinta ah ay sida ay rabto ka yeelato.
2-In Alle Ka Cabsi Laga Helo:Ma Wanaagsana inta badan in xaq laga galo caruurta , waxaana lagaaga digayaa (Eedo) inaad si wanaagsan ula macaamisho caruurta aad eedada u tahay.
Laga yaab in si qaldan aad ula dhaqanto waxaadna la kulmeysaa inaad ciqaab iyo carada alle , sidaas darteeda waxaa wanaagsan in si deganaan leh aad u xisaabtanto.
3-Ka Fikir Nadaafadooda , Waxbarashadooda & Cuntadooda:Waa waxyaabaha ugu muhiimsan ee laga rabo inay sameeyso eedada wanaagsan , maxaa yeelay waxaa la diidayaa in caruurta ay cadaadiso marka uu aabohooda maqan yahay , mana fiican in laba wijiilannimadaas la isticmaalo.
Waxaa waajib ah inaad fiiriso haddii ay waxbashada aadeen , sidoo kale iskuulka aadeen , si lamid ah waxaa wanaagsan in laga fikiro cuntadooda.
4-U Sheekeey , Ka Qosli: Soo jiidasho fiican ayey sameeyndoontaa haddii eedada ay sameeyso qodobadaan maxaa yeelay waxaa wanaagsan in mar walba ay u sheekeyso caruurta ka qosliso waqtina la qaadato.
5-Dareensii Inaad Tahay Hooyadooda, Haddiydna Kaga Naxso:Arinta ugu weeyn ee lagu soo jiidankaro ama loo sameeynkaro caruurta waa in haddiyad lasiiyo , maxaa yeelay mar walba waxaa waajib ah inay helaan dareen hooyannimo.
FG:Waxaa laga yaabaa inay waxyaabo badan oo intaan ka badan , Fadlan aragtidaada noo dhaaf oo nala wadaag.